I-Geofumadas phantse kwiifoto kuphela-iGeofumadas
Geofumed kwiifoto eziphantse
Ngo-Okthobha, 2010 Ukuzonwabisa / ukuphefumlelwa, Uhambo
Kuninzi ukwenza, ngokuqinisekileyo kuninzi. Apha ndikushiya okona kulungileyo kwezi ntsuku zokugqibela kwimifanekiso endishiye neencasa ezinomdla.
parachico Ndiza kukunika
Ngombumba wam intonga
i-chinchin yam iya kukuva
kunye nesarape yambala
Mermaid encinci ye-mermaid
Ndivela eChiapas, eChiapaneca
apho bonke abafazi
kwaye badumise ngokuthanda kwabo.
Ngeliphi isandi se-marimba,
Ndikhawuleza iinqwelo zam,
de lide lidumise umhlaba
i-conatus, magic, hullabaloo
Ndivuke ngobuhle bam
Ngaphezulu kweempawu zeChiapa de Corzo, ezineempazamo ezimbalwa zopelo lokukhanya kwerhuluneli ngonyaka ka 2000. ISumidero Canyon. Ukuziva ungabalulekanga, kudumbe umlambo ngenxa yezaqhwithi ngasekupheleni kuka-2010.
Isikhokelo saxelela ukuba amaIndiya angamaChías atsibela eweni ukuze aphephe ukuba lithanga. Kwiindonga ezime nkqo amaqhawekazi enza izidleke zawo kunye neebhokhwe kwezithe tye ngenxa yokoyika ukuwela kuthi.
Iminyaka eyi-730,000 iminyaka
Ubukhulu 5450 msnm
I diameter 25 Kilomitha kwisiseko
Umgama kwiindonga zekhredithi ukuya kumitha ye-840
Ngakwesokudla, ingwenya ihlala emva kwesidlo sasemini eqinisekileyo ukuba idluliselwe kwi-3 ngemini.
Akulingani kodwa kulungele ukutshintshwa kweeyure ze-27 zokuhamba, evekini elifutshane kakhulu.
Ndiyabulela uGrillo nabahlobo; ukupasa kweLa Pame, iiJacarand nezinye izinto azifani apha ... kodwa zibala.
Ngothando lukaThixo, masibekele bucala iLifa leLizwe. Kunzima nokucacisa ezinye izinto.
I-Choluteca izakuvelisa umculi obalaseleyo oomculi ...
Ohhh! I-nugget ene-jerky kunye nePozol evela eChiapas.
Isidlo esilungileyo. Ngamabinzana aseludongeni. Zimbini kuphela iindawo ze-UTM ezifuna iinkcazo ezininzi zokuziqonda. Omnye wabo uthi:
"Lowo oyeka ukutsana, unjalo amampa mphefumlo "
Imodem yeTIGO, izula phantse naphi na. Kwaye uPita ongumbusi.
Ndibona iingcaciso ezingadingekile.
Post edlulileyo«Ngaphambilini Njengoko Mapserver isebenza
Post Next Yiyiphi iBentley ezisa i-InspiredOkulandelayo »
Iimpendulo ezi-3 kwi "Geofumadas phantse kwiifoto kuphela"
Molo g!, Siyinkozo yedijithali yinkampani endiyiqalayo, yaqala ngoJanuwari walo nyaka silungisa iikhompyuter, abashicileli, sithengisa imimandla, senza ulwazi kwakhona, inkqubo yemihla ngemihla yokulungisa nokulungisa umasifundisane, umgca oza kuwulandela ulawulo oluzenzekelayo ...
Molo Mauricio. Ndinehambo elinde apho, ukubona ukuba ngeli xesha ndindwendwela iSan Cristobal nokuba uPalenque unika ixesha.
Ndiza kukwazisa, ukuze ubone ukuba ungandixelela okungakumbi malunga nephulo elithi "Singabantu bedijithali".
Izibingelelo ezivela eChiapas, ndiyabona ukuba wayazi inxalenye yale ndawo enhle kwaye ukuba ithatha imemori enhle, ndiyathemba kwaye sibuyele ukutyelela ngoJanuwari okanye ngoApreli ukuba kukho amaqela e-chiapa de corzo kunye ne-san cristobal ngokulandelanayo.